Iiraan oo dalbatay in loo soo xiro Madaxweynaha Mareykanka - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Iiraan oo dalbatay in loo soo xiro Madaxweynaha Mareykanka
Iiraan oo dalbatay in loo soo xiro Madaxweynaha Mareykanka
Dawladda Iiraan ayaa soo saartay amar xarig ah oo ka dhan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyadoo ka codsatay Booliiska caalamiga ah ee INTERPOL inay gacan ka geystaan soo qabashadiisa.
Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka Iiraan Cali Alqasimehr ayaa sheegay in Trump iyo inka badan 30 Xubnood oo kale ay ku eedeynayaan ku lug lahaanshaha weerarkii 3 Bishii Janaayo ee sanadkan 2020 ee lagu dilay Jeneraal Qassem Soleimani,kaas oo ka dhacay Magaalada Baqdaad ee wadanka Ciraaq.
Wakaaladda Wararka ee ISNA-da ayaa werisay in Alqasimehr uu carabka ku adkeeyay in Iran ay sii wadi doonto sii wadida dacwadiisa xitaa marka madaxweynaha Mareykanka uu waqtiga xilheyntiisa ay dhamaato.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weli ka jawaadin eedeynta iyo codsigaan ka yimid dowladda Iiraan ee ah in laga caawiyo soo xerida, iyada oo loo heysto dilkii Jeneraal Qassem Soleimani.
Previous articleDhageyso:-Puntland oo fagaaro ku burburisay Khami farabadan
Next articleMadaxweynaha Galmudug oo gaaray Cabudwaaq